Umaki: ama-boomers | Martech Zone
Ukumaketha Kokukhiqiza: Ukuqonda Amaqembu Ahlukene Eminyaka Nezintandokazi Zawo
Lwesibili, Disemba 26, 2017 Lwesibili, Disemba 26, 2017 UDonna Moores
Abakhangisi bahlala befuna izindlela namasu amasha okufinyelela izithameli zabo futhi bathole imiphumela emihle kakhulu emikhankasweni yokumaketha. Ukumaketha okujwayelekile kungenye yezindlela ezinikeza abathengisi ithuba lokungena ngokujulile kwizethameli ezihlosiwe futhi baqonde kangcono izidingo zedijithali nezintandokazi zemakethe yabo. Kuyini ukumaketha okujwayelekile? Ukumaketha okujwayelekile kuyinqubo yokuhlukanisa izethameli ngezigaba ngokuya ngeminyaka yabo. Emhlabeni wokumaketha, i-